သင့် Google အကောင့်ကို Password မထည့်ဘဲနဲ့ ဘယ်လို Sign In ဝင်မလဲ ? – DigitalTimes
သင့် Google အကောင့်ကို Password မထည့်ဘဲနဲ့ ဘယ်လို Sign In ဝင်မလဲ ?
FEATURES HOW TO Mobile & Tablets Mobiles & Tablets Softwares & Application Softwares & Application Tips
Google က သင့်အကောင့်များကို Sign In ဝင်တဲ့အခါမှာ Password များ ရိုက်ထည့်ရတဲ့ အလုပ်ရှုပ်မှုကို သက်သာစေဖို့ စွမ်းဆောင်ချက် အသစ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Password များ မလိုဘဲ သင့်ဖုန်းနဲ့ Sign In လုပ်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့် ပီစီ သို့မဟုတ် အများသုံး ပီစီ သို့မဟုတ် Device တစ်ခုခုကနေ သင့် Google အကောင့်များကို Sign In ဝင်တဲ့အခါမှာ Password များ ရိုက်ထည့်စရာ မလိုတော့ဘဲ သင့်ဖုန်း သင့်လက်ထဲမှာ ရှိနေတာနဲ့ Sign In ဝင်နိုင်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး Sign In Settings မှာ အဲဒီ စွမ်းဆောင်ချက်ကို Enable လုပ်ရမှာပါ။
Android မှာ ဆိုရင် Settings> Google > Sign In & Security ထဲသွားပါ။
iOS မှာ ဆိုရင် Google App ကို အင်စတောလုပ်ထားရမှာပါ။ သင့်အကောင့်ကို Sign In ဝင်ပီးရင် ဘယ်ဘက်အပေါ်ထိပ်မှ သင့်ရဲ့ Gmail Address ကို နှိပ်ပါ။ Google Account Settings > Sign In & Security ထဲသွားပါ။
ဒတ်စတော့မှာ ဆိုရင် ဘရောက်စာကနေ accounts.google.com ကိုသွားပါ။ Sign In & Security ထဲသွားပါ။
Device အားလုံးမှာ Sign In & Security ထဲရောက်ရင် Tired of typing passwords သို့မဟုတ် Use your phone to sign in ထဲသွားပြီး Set Up လုပ်ပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ Tired of typing password ကို မမြင်ရရင် Two-Step Authentication ကို Disable လုပ်ပါ။ Disable လုပ်လို့မှ မမြင်ရသေးရင် သင့်မှာ အဲဒီ စွမ်းဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုလို့ မရသေးလို့ ဖြစ်မှာပါ။
Phone Sign In ကို Turn On လုပ်နည်း
Tired of typing password ထဲသွားရင် သင့် အကောင့် Password ကို တစ်ခါ ထည့်ပေးရမှာပါ။ ပြီးရင် Set Up ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ သင့်ဖုန်းကို ရွေးချယ်ပေးပါ။ သင့်ဖုန်းမှာ သင့် Google Account ကို ထည့်ပေးထားရမှာပါ။
သင့်ဖုန်းဖြင့် Sign In ပြုလုပ်ခြင်း
သင့် ကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် အခြား Device တစ်ခုကနေ သင့် အကောင့်ကို Sign In ဝင်တဲ့အခါမှာ အီးမေးလိပ်စာကို ထည့်ပေးရမှာပါ။ ပြီးရင် Next ကို နှိပ်ပါ။ ဂဏန်း ၂ လုံးကို ပြသပေးမှာပါ။ ပြီးရင် သင့်ဖုန်းမှာ Trying to sign in ဆိုတဲ့ စာသား ပေါ်လာမှာပါ။ အဲဒါကို နှိပ်ပြီးရင် Yes ကို ရွေးပေးပါ။ အဲဒီနောက်မှာ ဂဏန်း ၂ လုံးပါတဲ့ နံပါတ် သုံးခုကို မြင်ရမှာပါ။ ကွန်ပြူတာမှ နံပါတ်တဲ့ တူညီတဲ့ တစ်ခုကို နှိပ်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် ကွန်ပြူတာမှာ သင့်အကောင့်ကို Sign In ဝင်ပေးမှာပါ။
သင့် ဖုန်းပျောက်နေရင် သို့မဟုတ် လက်ထဲမှာ မရှိရင်
သင့် ဖုန်းပျောက်နေရင် သို့မဟုတ် လက်ထဲမှာ မရှိရင် Sign In Screen မှာ “ Try another way to sign in “ Link ကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် Password နဲ့ Sign In ဝင်နိုင်ပါတယ်။ သင့် ဖုန်းပျောက်နေတာ ဆိုရင်တော့ Sign In ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာ Sign In Settings ထဲသွားပြီး “ Sign In with your phone “ Settings မှာ သင့်ဖုန်းကို Delete လုပ်ပါ။
ref : pc world
Samsung က သူ့ရဲ့ ကွေးညွှတ်နိုင်တဲ့ ဖုန်းကို တက်ဘလက်လိုပါ သုံးနိုင်မယ်လို့ ပြော
Oppo က Mobile Gaming အတွက် Hyper Boost နည်းပညာကို မိတ်ဆက်
Redmi9Prime မှာ FullHD+ မျက်နှာပြင်ပါမှာ သေချာပြီ
Unisoc Processor ပါတဲ့ Nokia C3 ကို Geekbench မှာ တွေ့လာရပြီ
Microsoft က တရုတ် ကုမ္ပဏီထံက‌နေ TikTok ကို ဝယ်ယူဖို့ Trump နဲ့ စကားပြောနေ
Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) ရဲ့ ဓါတ်ပုံထွက်ပေါ်လာ
ဈေးချိုတဲ့ Honor 9S နဲ့ Honor 9A ကို ကြေညာ
Huawei က EMUI 11, HarmonyOS 2.0 တို့ကို စက်တင်ဘာလမှာ ကြေညာမည်